Ireo mpandraharaha mivondrona ao anatin’ny FIvondronan’ireo Orinasan’i Vakinankaratra na ny FIOVA no mpikarakara mba entina hifanampiana sy hitadiavam-bahaolana indrindra ny amin’ny lalam-bokatra sy lalam-barotra. Ho an'ny faritra Vakinankaratra manokana dia mbola maro ireo olana sedraina na dia eo aza ny ezaka ataon’ireo mpandraharaha. Ankoatra ny sakana amin’ny fikarakarana ny taratasy dia tena mbola mampikaikaika ny faharatsian’ny lalana amin’ny famoahana ny vokatra any ambanivohitra rehetra any. Tsiahivina anefa fa manana orinasa miisa 115 ny any amin’ny faritra Vakinankaratra ary misehatra amin'ny fanodinam-bokatra ho lasa sakafo avokoa ny ankamaroanyireo. Ankoatr’izay dia izy ihany koa no mamatsy ny 70%n’ ireo sakafo voahodina manerana an'i Madagasikara. Soa fa misy ny hetsika ara-toekarena tahaka itony hanampiana ny tantsaha amin’izany olana rehetra izany. Ny taona 1997 moa no niandohan'ity hetsika « Vitrine du Vakinankaratra » ity, ary mbola tsy nisy fiatoany izany hatreto. Hatramin’izay no efa nahafantarana izany olana miverimberina izany saingy ny omaly tsy miova hatramizao.